ငါးဒုက္ခ@ငါးရာဇဝတ်သား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ငါးဒုက္ခ@ငါးရာဇဝတ်သား
Posted by Sine Sant on Apr 24, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 26 comments
ငါးဒုက္ခ @ ငါးရာဇဝတ်သား
သင်္ကြန် ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ ဘယ်မှမသွားဘဲ အိမ်မှာ နေရင်း မုန့် တွေအဝအပြဲ လုပ်စားဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ထဲမှာမှ အင်းသားရိုးရာ ငါးကြော် တွေလည်း သုံးရက် ဆက် တိုက်လောက်ကြော်စား လိုက်ကြတာ အနံ့ တောင်မခံချင် လောက်အောင် ဝ သွားတော့တယ် ။ အဲ့တုန်းကတော့ ဒီလိုငါးကြော် တနှစ်လောက်မစားလည်းနေနိုင် ပြီလို့ အသံကောင်းဟစ်ခဲ့ မိပါ ရဲ့ ။ ခုတော့ ပြန်စားချင်လာလို့ စားတပုဒ်အနေနဲ့ လွမ်း လိုက်ပါတယ် ။
ငါးဒုက္ခ တနည်းအားဖြင့် ငါးရာဇဝတ် . .
ငါး ကြော် မယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူ နဲ့ ပဲ လူတိုင်းကြော်တတ်ပါတယ် ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်း များစွာရှိတဲ့ အထဲမှာ အင်းသားလူမျိုးအကြောင်းကို နဲနဲပြောပြ ချင်ပါတယ် . . . အဟမ်းးးး
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း ,အင်းလေး ဒေသ မှာ နေထိုင်တဲ့ အင်းဆား (သူတို့ အခေါ် ) အင်းသားလူမျိုး တွေဟာ့(အများအားဖြင့် ) ရိုးသားဖြူစင် ပြီး သူတို့ နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ တဲ့နေရာမှာ အရမ်းအဆင်ပြေ ပါတယ် ။ အင်းဆား လူမျိုးတွေမှာ သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာ တော့မရှိပါဘူး ။ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု နဲ့ တေးဂီတ အနုပညာ တွေတော့ ရှိပါတယ် ။ သူတို့ ပြောတဲ့ စကားကတော့ မြန်မာ စကားကိုမှ တော်တော်ဝဲပါတယ် ။ နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ဝဲ ပါတယ် ။
ဥပမာ- သား ဆို ဆား
– သွေး ဆို ဆွီး
စသည်ဖြင့် ပေါ့ ။ လုလု မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကပြောဖူးတယ် ” အင်းသားတွေဟာ မြန်မာစကားကိုမြန်မာ တွေနားမလည်အောင်ပြောတယ် ၊ ရိုက်ချင်အောင်ပြောကြတယ် ” တဲ့ ။
တကယ်လည်း ဟုတ်ပါတယ် ။
လုလုထင်တယ် အင်းသားတွေဟာ တော်တော် ကို ကိုးလို့ ကန့် လန့် နိုင်တယ် ကက်တီးကက်သပ် နိုင်တယ် လို့ ။ (သူတို့ ကြားရင် လာရိုက် နေမလားမသိ)
သူ တို့ ရဲ့ ဘိုးဘေးစဉ်ဆက် နေထိုင်လာတာကိုက ရေကန် ထဲမှာ အိမ်ဆောက်နေ ကြတယ် ။ ငါးဖမ်းလှေငယ်တွေကို လက်နဲ့ လှော်လည်းရဲ့ သားနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ခြေထောက်နဲ့ လှော်ကြတာပါ ။ ဒါလည်းအကြောင်းရှိလို့ ဖြစ်မယ်ဆို ပြီးလေ့လာကြည့်တော့ အင်းသားတွေဟာ အရင်အချိန်တုန်းက ငါးဖမ်းခြင်းဟဲာအဓိက့ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းဖြစ်တယ် လို့ ပြော ပြပါတယ် ။ဒါကြောင့် “အင်းသားသေ ငါးဖိန်း ,ငါးဖိန်းသေ အင်းသား ” ဆိုတဲ့စကားပုံပေါ်လာတာပါ ။ လှေကို ခြေထောက်နဲ့ လှော် တာ ဆိုလို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်းသားတွေပဲ ရှိမယ် ထင်ပါတယ် ။ အင်းသားတွေဟာ ဂီတ ကိုစွဲလန်းရူးသွပ် ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပြီး ဒေါသ လည်းကြီးတတ်ကြပါတယ် ။
စကားပြောရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ တုတ်ထိုးအိုးပေါက် ပြောတတ်ကြတယ် ။ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်လည်းအပြည့်ရှိကြပါရဲ့။ အင်းသား ဆယ်ယောက်မှာ ကိုးယောက်လောက်က အရက်ကို စွဲစွဲလန်းလန်း သောက်ကြ ပါတယ် ။ လုလုတွေ့ ဖူးတဲ့အင်းသားတွေ ခေတ်မီ ပြီးအလုပ်အရမ်း လုပ်ကြ တယ် ။
အစားအသောက် တွေချက်ပြုတ်စားတဲ့နေရာ မှာလည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ အရသာရှိရှိ လုပ်စားတတ်ကြပြန်ပါတယ် ။
အင်းသားအစားအစာမှာဆို လုလု အကြိုက်ဆုံးက ငါးရံ့ ဆေးခါးဟင်းရည် နဲ့ငါးဒုက္ခ ကိုပါ ။
တကယ်တော့ လုလု အဓိကပြောပြချင်တာက ငါးဒုက္ခ@ငါးရာဇဝတ် လုပ်တဲ့ အကြောင်းကိုပါ ။ အင်းသားနဲ့ ငါးဒုက္ခ ဆိုတာ ခွဲလို့ မရတဲ့ အတွဲ တွေပါပဲ ။ အဲ့ဒါကြောင့် အင်းသားတွေအကြောင်းကို ပြောပြလိုက်တာ နဲနဲ ပေရှည် သွားတာကို ခွင့်လွှတ် ကြပါလို့ ။
သင်္ကြန် အကြိုနေ့ မှာ လုလု တို့ ရဲ့ အသိ မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့အင်းသားဦးလေးတစ်ယောက် လက်ဆွဲခြင်းတွေနဲ့ အိမ်ကိုရောက်လာပါတယ် ။ ဘာတွေလည်း လို့ မေးတော့ ငါးဒုက္ခလုပ် စားကြဖို့ ဈေးသုံး (ဈေးဝယ် ) လာတာတဲ့ ။ သူ့ ဆွဲခြင်းထဲက ပစ္စည်းတွေ ထုတ်ကြည့် လိုက်တော့ . . .
ကြက်သွန်မိတ် = ၅ စည်း
လက်လေးလုံးစာလောက်ရှိတဲ့ ဂျပန်ငါး = ၆ ကောင်
အမွှေးနံ့ အတွက်သုံးဖို့ ဖက်ဖယ်ရွက် = ၃ စည်း
ဂျင်း = ၅ ကျပ်သား
ခရမ်းချဉ်သီး = ၃ လုံး
ကြက်သွန်ဖြူ = ၅ ကျပ်သား
ငရုတ်သီးစိမ်း နဲနဲ (ကြိုက်ရင်ထည့်ဖို့ )
ဆနွန်း = ၅ ကျပ်သား
ဆား (လိုအပ်သလောက်ထည့်ဖို့ )
အချိုမှုန့် အနည်းငယ် . .
သံပရာသီး = ၂ လုံး
ကဲ ချက် ကြမယ် ဆိုတော့. . .
အင်းသားဦးလေး ခိုင်းတာတွေကို လုပ်ပေးရပါတယ် (သူ က ဘိုကတော်ဟင်းချက်နည်း နဲ့ ချက်တာ )
အရင်ဆုံး သူ က လုလု တို့ ကို ငါးရဲ့ ဗိုက်ထဲ အစာသွပ် ဖို့ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ဖက်ဖယ်ရွက် နဲ့ ကြက်သွန်မိတ် ကို ပြားပြား လှီး ခိုင်းတယ် ၊ ဂျင်း ကိုထောင်းပြီးအရည် ညှစ် ခိုင်းထားတယ် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ နဲ့ ငရုတ်သီးနဲနဲကို ထောင်းခိုင်းထားတယ် အားလုံးပြီးရင် ဒယ်အိုးထဲက ဆီ ပူ ပြီ ဆိုရင် ခုန ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကို ထည့် ၊ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ အရွက် တွေကိုထည့် ဆား အချို မှုန့်လိုအပ်သလောက် ခန့် မှန်းပြီးထည့် ပြီး ကျက်သွားတဲ့အထိ ချက် ခိုင်းပါတယ် ။ အရွက်တွေ ညိုးကုန်တဲ့အထိ ချက် ရပါတယ် ။သူ ကတော့ ငါးကိုင်ပါတယ် ။ သူငါးကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲ ဆိုတော့ ငါးရဲ့ အကြေးခွံ နဲ့ ဆူးတောင်တွေကို ချွတ် တယ် ။ ပြီးရင့် ငါးရဲ့ တဖက်တချက် ကို ဓားနဲ့ နှစ်နေရာ သုံးနေရာလောက် မွှန်း လိုက်ပါတယ် ။နှယ် တဲ့အခါ ငါးအသားထဲကို အရသာ တွေဝင်အောင် လို့ ပါ ။ နောက်. . .ငါးရဲ့ ကျောဖက် ခေါင်းကနေ အမြီးပိုင်းထိ ထက်ခြမ်း ခွဲလိုက်ပါတယ် ဗိုက် ဖက်က အခြမ်းကိုတော့ ကွဲမသွားအောင် သတိထားရပါတယ် ကျောဖက်ပဲခွဲတာပါ ။
ငါးရဲ့ အူတွေ အညစ်အကြေးတွေကိုသေချာ ဆေးကြော သန့် စင် ပြီးရင်တော့ သံပရာရည် ၊ဂျင်းရည် ၊ ဆား နဲနဲ ထည့်ပြီး သမ အောင်နှယ် ပါတယ် ၊ပြီးရင် ဆနွန်းနဲ့ နဲ့ ငါးတကိုယ်လုံးကို သုတ်လိမ်းထားလိုက်တယ် ။
ငါးကိုင် လို့ ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် ခုနက ချက်ထားတဲ့ အစာ တွေကို ငါးဗိုက်ထဲ သွပ် ထည့်ပြီး နှီးကြိုးနဲ့ ချည် ပါတယ် ။ နှီးနဲ့ ချည် ထားတာက ငါးဗိုက်ထဲက အစာ တွေထွက်ကျမသွားအောင် လို့ ပါ ။ အဲ့လိုကြိုးနဲ့ ချည်ထားလို့့ ငါးရာဇဝတ်သား လို့ ခေါ် တာပါ ။
ရှိသမျှငါးတွေ အားလုံး ဗိုက်ထဲအစာ သွပ်လို့ ပြီးပြီဆို ရင်တော့ ဆီများများထည့်ပြီး အပူပေးထား တဲ့
ဒယ်အိုးထဲ ကို ငါးတစ်ကောင်ချင်းစီကို ဖြည်းဖြည်း လေး ထည့်ကြော် လိုက်ရုံ ပါပဲ ။ သာမန် ငါးကြော်သလို ကြွပ် ရွနေအောင် ကြော် ထားလိုက်ပါတယ် ။ အစားပုတ်ရင်အလုပ်ကြာ တယ် ဆိုတာ တကယ်မှန်ပါတယ် ။
အချိန်မအားတဲ့နေ့ တွေဆို ဒီလိုဟင်းမျိုး စားချင်လို့ အိမ်မက်တောင်မမက်နိုင် ပါဘူးးးး ။
တယောက်က ငါးကြော်နေတဲ့ အချိန်ကျန်တဲ့ သူတွေကတော့ ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့ အရည် တွေ သွားဝယ် နေပါပြီ ။ အစားအသောက် ဆိုတော့လည်း သောက်စရာ တခုခု ပါမှ စားသောက်ဝိုင်းက ပိုပြီးသာယာစိုပြေ တယ်မဟုတ်ပါလားးး ။
ကဲ ငါးတွေအကုန် ကြွပ်ရွ နေအောင်ကြော်ထားပြီးတာတောင် စားလို့ မရသေးဘူးတဲ့ အဲ့ ငါး တွေကို ရေ နဲနဲ နဲ့ ပြန် နပ်ရ ပါသေးတယ် (ပြောပါတယ် အင်းသားတွေကနဲနဲလည်း အရစ်ရှည် ရမှ )၊ ဆယ် မိနစ် လောက် နပ်ပြီးရင်တော့ မွှေးကြိုင်ပြီး အရမ်းအရသာရှိတဲ့ ငါး ဒုက္ခ @ ငါးရာဇဝတ် ဟင်းကို မန်ကျည်းအချဉ်ရည်ကောင်းကောင်းနဲ့ အရသာခံစားလို့ ရပါပြီ ။ ဒါဟာ အရိုးရှင်းဆုံး င်းသားအစားအစာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အလုပ်နားချိန်မှာ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ မုန့် တွေလုပ်စား တာဟာ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို ပိုပြီးတိုးတက်ခိုင်မာ လာစေတာက မောရမှန်းတောင် မသိ အောင်ပါပဲ ။ စိတ်လည်းချမ်းသာတယ် ဗိုက်လည်းပြည့် တယ် လေ ။ အဲ့လို ဟင်းမျိုးပဲ သုံးရက်ဆက်တိုက် လောက်
စားလိုက်ရတော့ နောက်ထပ် မမြင်ချင် လောက်အောင် အီဆိမ့် သွားခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် လေ အခု ပြန်စားချင် နေပြီ ။
ဆေးခါဟင်းလေးသောက်လိုက် ငါးဒုက္ခလေးစား လိုက်နဲ့ ဘဝရဲ့ သောက တွေကို ခဏလေး တော့မေ့ သွားမိတာ အမှန်ပါပဲ ။
မဟုတ်​ရင် ရေးထားတာကိုဖတ်ပြီး တဂွီဂွီဖြစ်နေချိန် ပုံပါတွေ့ပြီး ရောဂါပိုတက်​နိုင်​ရဲ့
စိတ်ပူနဲ့ ပုံ ထည့် ပေးဖို့ ကြိုးစားနေပြီ
သြော် ငါးး ဒုက္ခ ဖတ်ရင်းးး
ငါ့ ဒုက္ခ ပါတကားးးးးးး
ကြောင်ရီးတွေ့ရင် စားချင်သီ ပြောအူးမှာပဲ
ဟိုနေ့က ဟိုဂလုထဲ…. အဲ့ ငါးဒုက္ခဆိုတာကြီး ပုံလာပြကတည်းက.. အံ့အောပြီး…မေးနေမိသေး…
အဲဒီပုံထဲက ငါးတွေကို ကြည့်ပြီး… စားချင်သလိုလို မစားချင်သလိုလို ဖြစ်နေတာ…
လူဒုက္ခ ဆိုပြီး ဖွေးဖွေးကို ကြော်စားလိုက်ရ…
စားရဲ လို့ လားးး
ဒီငါးဟင်း ကို ကြားဖူးဒယ် ..
စားတော့ စားဖူးဘူး …
မိန်းမ ရမှဘဲ .. ချက်ကျွေးဖို့ ပြောရဒေါ့မယ် ..
အင်းသူ ယူရင်ပိုကောင်းတယ် အံစာ ရေ
အွန်းလေ.. အင်းသူကို ယူပြီး ချက်ကျွေးခိုင်း…
အင်းထဲ မှမဟုတ်ပဲ အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်စားလို့ ရပါတယ်
ငါးနဲ့ အရွက် တွေပဲ အဓိက လိုအပ်တာလေ
၁။ ငါးရံ့ကို ခေါင်းဖြတ် ကလီစာထုတ် သန့်စင်ပြီးတော့ အကောင်လိုက်ကို အသားကြေသွားအောင် အနယ်းငယ် ထုပြီး ဆား၊ ဆနွင်းနယ်တယ်။ (အချိုမှုန့်စားရင် ထည့်ပေ့ါ။)
၂။ ပြီးရင် ကြက်သွန်ဖြူ နီ ငရုတ်သီး စပါးလင် ဂျင်းကို ဆားနဲ့ရောထောင်းထားတာကို ဗိုက်ထဲအစာသွပ်၊
အစာသွပ်ထားတဲ့ငါးကို အပေါ်ကနေ စပါးလင် အဖျားပိုင်းနဲ့ချည်၊
၃။ ဆီများများမှာ မီးအေးအေးနဲ့ ကြွပ်အောင်ကြော်။
စားဖူးတယ် ငါးဒုက္ခမှန်းတော့မသိဘူး။ အဲ့လိုထပ် ငါးသံပုရာပေါင်းတို့ တံငါသည်ဟင်းတို့ ပိုသဘောကျမိတယ်။ အဲ့လိုငါးကိုကြေ်ာပြီး အနှစ်နဲ့ပြန်ဖုံးတာရှိသေးတယ်နော်။ ပင်လယ်စာကတော့ အကုန်ကြိုက်တယ်။
. တောင်ကြီးမှာတုန်းက ငါးဖိန်း ချက်ကျွေးတုန်း က “အင်းသားသေ ငါးဖိန်း ,ငါးဖိန်းသေ အင်းသား ” အဲဒီ စကားကြားပြီး မစားချင်ခဲ့ဘူး။
အခုတော့ ငါး ဆိုရှားလွန်းလို့ ဘာဖြစ်ဖြစ် စားချင်နေတော့တာဘဲ။
ကျေးဇူးဘဲ လုလုရေ။ :))
ဟီးးဟီးး ခုလို ဒါ့ပုံကိုလာစားပေးသွားတဲ့အတွက်လည်း
ကျေးဇူးပါ အရီးခင် ရေ
ဟင်းတွေထဲမှာ အဲ့ ဒုက္ခ အမည်ခံထာတဲ့ ငါးဒုက္ခတို့ အမဲဒုက္ခတို့ဆို အရမ်းကြိုက်။
ငယ်ငယ်က စားခဲ့ဖူးတဲ့ ဟင်းလေးတွေကို ပြန်သတိရမိလို့ ကျေးဇူးပါ။
လူ တွေကလည်းး ဒုက္ခဆို အတော်ကြိုက်ကြတဲ့ပုံပဲ
အစားအသောက်ကိုတောင် ဒုက္ခ လုပ်ပြီးစားကြတာ
လူ့မကို အဲလို ဆားခြင်လိုက်ထှာ…
အဲ့လို အလုပ်ပိုလေးတွေ လုပ်ရလေ..
ဟုတ်ပါ့ တနေ ကုန်တဲ့ ဟင်း
စားချင် လို့ သာ ပေါ့ တကယ် အလုပ်ရှုပ်တယ်
ငါးဒုက္ခ ဆိုလို့ ပုဒ်​မ ၅ လား ဘာလား​ပေါ့ ။ ဖတ်​စကလည်း အင်း ပုတ်​မ ၅ ​တော့ မဟုတ်​ဖူး ​ပေါ့​လေ ။ အဲ့ ငါး ဒုက္ခ ဆိုတာကို ငါးခူတို့ ငါးရံ့တို့လို ငါးပဲလား ဘာလား ညာလားနဲ့ ပြီး​တော့မှ ငါးအဆာသွတ်​ကို​ပြောတာကိုး ။ အဆာသွတ်​​ကြော်​ကို အလုပ်​ရှုပ်​လို့ လုပ်​မစားဖြစ်​ဖူး ။ ငါးဖုတ်​​တော့ အရက်​နဲ့ မြည်းဖူးတယ်​ ။ ​ချောင်းနံ​ဘေးမှာတင်​ ဖမ်းမိလာတဲ့ ငါးလတ်​လတ်​ဆတ်​ဆတ်​ကို ရွံ့နဲ့အုံပြီး မီးဖိုနဲ့ ဖုတ်​တာ ။ ရွံ့​တွေ​ခြောက်​သွားတာနဲ့ ရွံ့​တွေ​ပြောင်​​အောင်​ခွာ အ​ပေါ်ယံက ငါးအ​ကြေးခွံက ရွံ့နဲ့ကပ်​ရက်​ပါသွား ။ သံပုရာရည်​​လေးညှစ်​ပြီး စားရတာ ။ အဲ့ မြည်းရတာ တစ်​ကယ်​​ကောင်း
ဒါလည် ဒုက္ခ တမျိုးပဲ အဘနီ
အဲ့ ရွံ့ ကို ဘယ်မှာ သွားရှာရ မလဲ
ဘယ်လို ဗွက် အဲ ဘယ်လို ရွံ့ လဲ